Dekedda Cajmaan iyo Ganacsiga Soomalida
Dekedda Cajmaan ee dalka Imaaraadka ayaa noqotay tan ugu ballaadhan ee laga raro badeecada u socota Soomaaliya gaar ahaan Muqdishu.
Dekeddan ayaa maamulka dhoofinta alaabooyinka ganacsiga ay gacanta ku hayana ganacsato Soomaaliya ah, taasoo kalsooni gelisay ganacsigii Soomaalida.
Mid ka mid ah ganacsatada wax ka dhoofisa dekeddaasi oo lagu magacaabo Axmed Maxamed Dhiblaawe oo ku magac-dheer Dhegaqoob, ayaa VOAda u sheegay in dekaddau ay aad u shaqayso in u dhaxaysa bisha lixaad illaa bisha sagaalad.
Maraakibta ka baxda ayaa xamuulka ay qaadaan lagu qiyaasay inta u dhaxaysa 4500 oo Ton inllaa iyo 12 kun oo Ton.
Dhegoqoob ayaa sheegay in dekadda Cajman ay ahayd dekkad dansan oo aan sidaas u shaqo badnayn, laakin sida uu sheegay laga bilaabo 1996kii ayaa Soomaalidu ay bilaabeen in ay ka rartaan maraakiibta waa wayn taasi oo soo noolaysay dekkaddii.
Waraysiga ganacsadaha oo dhamaystiran ka dhegayso qaybta hoose ee boggan.